कृषि मजदुरका महिला नाइके |
कृषि मजदुरका महिला नाइके
प्रकाशित मिति :2017-08-31 14:49:09
चितवन । दबदबे हिलोमा धान रोपिरहेकी सपना गुरुङको मोवाइलको घन्टी बज्यो । एक हात सलले पुछ्दै मोबाइलको फोन उठाइन् – हेलो ! भोली त अर्काेकोमा रोप्न जानु छ । तपाईंकोमा पर्सि रोपौंला है ।’
कुरा सकेर फेरि खेतलासँगै रोप्न थालिन् । एकैछिन् मोबाइलको घन्टी बज्यो । फोन उठाइन् र भनिन् ‘तपाइकोमा चाँही निकोपर्सि मात्र ।’ अनि प्रश्न गरिन् ‘कति जना आउनुपर्छ ? उताबाट के जवाफ आयो कुन्नी ! हुन्छ भन्दै सपनाले कुरा टुङ्ग्याइन् ।
साथीहरुलाई सहयोगको लागि थालिएको कामले उनलाई मजदुर खोजिदिने नाइकेको रुपमा चिनायो । अहिले एकजना मजदुर खोजिदिएबापत बापत उनले अहिले २५ रुपैयाँ र रु ५० को रुपैयाको रिचार्ज कार्ड पाउने गरेको बताईन् ।
नाइकेको भूमिका प्रष्ट्याउँदै सपना भन्छिन् ‘दिउँसोको मेला रहेछ भने बिहान फोन गरेर भनिदिन्छु । बिहान जानुपर्ने रहेछ भने बेलुका नै भनिदिन्छु ।’
भरतपुर १८, गाजीपुरकी ५१ वर्षीया खुममाया आलेको परिचय पनि महिला नाइके हो । १९ जना महिला मजदुरकी नाइके खुममायाको समूहले पनि खेत रोप्ने, मकै, धान गोड्ने, तरकारी बारीमा काम गर्ने काम गर्छ ।
६ वर्षदेखि नाइके काम गर्दै आएकी खुममायाले उनले प्रति मजदुर २५ रुपैयाँ पाउँछिन् । मजदुर खोजिदिने कामसँगै उनी आफै पनि मजदुरी गर्छिन् । जसबाट उनलाई थप कमाई हुन्छ ।
महिला नाइकेले नै चलेको रकमभन्दा कम ज्यालामा बोलाए त्यो ठाउँको काम नै रोकिदिने पनि गरेमा छन् । भरतपुर महानगरपालिका १७, गोब्रेनीकी सुन्तली बस्नेत सामान्यतया चल्तीको ज्याला जग्गाधनीले दिने गरेको बताउँदै कसैले नदिए अर्को पटकदेखि उसकोमा काममा नै मजदुर नलैजाने बताउँछिन् ।
उनी ४ वर्षयता कृषि मजदुरकी नाइके हुन् । विशेष गरी उनीहरुको समूहमा महिला मजदुर नै हुने गरेका छन् । तर, धान रोप्ने मौसममा भने पुरुषपनि खोज्नुपर्ने उनले बताईन् । नाइकेसँग सम्पर्क गर्दा भने काम मिलिरहने हुनाले मजदुरहरु पनि नाइकेको समूहमा बस्न रुचाउँछन् । भने, जग्गाधनीले पनि एक जनालाई मात्रै सम्पर्क गर्दा मजदुर पाइने हुनाले नाइकेलाई नै सम्पर्क गर्छन् ।
पछिल्लो समय अधिकांश पुरुष गाउँमा भेटिँदैनन् । कोही विदेशिएका छन् त कोही राम्रो रोजगारीको आशामा सहर पसेका छन् । त्यसको प्रभाव महिलाले नाइकेमा अवसर पाएका अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल चितवनकी अध्यक्ष गौरी अधिकारी बताउँछिन् ।
अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाको नेतृत्व बढेझैं कृषि क्षेत्रमा पनि महिलाले नेतृत्वले प्रवेश पाउन थालेको अधिकारीको बुझाई छ । महिला कामदारको नेतृत्व महिलाले नै गर्दा तल्लो तहदेखि नै समाज रुपान्तरणमा पनि टेवा पुगेको बताउँदै अध्यक्ष अधिकारीले कृषिमा काम गर्ने महिलाबीच सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन् ।
कृषि काममा मजुर खोजिदिन महिला नाइके हुँदा जग्गाधनीले पनि सहज महसुस गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिका १५, की सीता पन्डित भन्छिन् ‘पहिला पहिला पुरुष नाइकेहुँदा भनेको समयमा कामदार पनि नल्याइदिने । ज्याला पनि पनि मनपरी माग्ने गर्थे । तर महिला नाइकेले इमान्दार भएर काम गरिदिन्छन् ।’